ဗန်ပါစီဟာ ယူနိုက်တက် မှာ ကစားဖို့ အတွက် အံဝင်တဲ့သူ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဗန်ဟားလ် - SPORTS MYANMAR
ဗန်ပါစီဟာ ယူနိုက်တက် မှာ ကစားဖို့ အတွက် အံဝင်တဲ့သူ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဗန်ဟားလ်
By Edi Tor March 27, 2019
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဟောင်း ဖြစ်သူ လူးဝစ် ဗန်ဂါးလ် က အသင်း မှာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ အချိန် ကာလ အတွင်း ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ ဟာ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ဆက်လက် ကစား ဖို့ သင့်တင့် တဲ့ ခြေစွမ်း ကောင်းမွန် ခြင်း မရှိ ခဲ့ဘူး လို့ ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဗန်ပါစီ ဟာ အာဆင်နယ် မှ ယူနိုက်တက် ဆီ ပေါင် 24 သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာသူ ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ယူနိုက်တက် တို့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယား လိဂ် ဆွတ်ခူး ခဲ့တဲ့ 2012 – 13 ရာသီ မှာ အသင်း အတွက် အထူး ခြေစွမ်း ကောင်း ပြသ ရင်း 26 အထိ သွင်းယူ ပေးထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အတွင်း သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ ရဲ့ ဟတ်ထရစ် က ယူနိုက်တက် တို့ကို အကြိမ် 20 မြောက် ပရီးမီးယား လိဂ် ဖလား ကို ရရှိ စေခဲ့ ပါတယ် ။
အ့ဒီ နောက် အသင်း ကို နည်းပြ သစ် ဒေးဗစ် မိုယက်စ် ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ ရာသီ မှာ ဗန်ပါစီ ဟာ အသင်း အတွက် 18 ဂိုး ထိ သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ပြန် ပါတယ် ။ အဆိုပါ ရာသီ မှာတော့ ယူနိုက်တက် ဟာ အဆင့်7အဖြစ် နဲ့သာ ရာသီ ကုန်ဆုံး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ နောက်တော့ ယူနိုက်တက် ဆီကို လူးဝစ် ဗန်ဂါးလ် က နည်းပြ သစ် အဖြစ် ရောက်ရှိ လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ရာသီ မှာတော့ ဗန်ပါစီ ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဖို့ ရေပန်း အစား ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ပေမဲ့ ဗန်ဂါးလ် က ရွန်းနီ ကို အဆိုပါ ရာထူး ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ 2014 – 15 ရာသီ မှာတော့ ဗန်ပါစီ ဟာ အသင်း အတွက် 10 ဂိုးသာ သွင်းယူ ထားနိုင် ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရာသီ က သူ့ရဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ နောက်ဆုံး ဘောလုံး ရာသီ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဗန်ဂါးလ် ရဲ့ ခံစစ် နဲ့ ကွင်းလယ် မှာပဲ ဘောလုံး ကိုင် ကစား ခဲ့ ရတဲ့ ကစား ကွက် ဟာ ဗန်ပါစီ အတွက် တော့ အကျိုး မဖြစ် ခဲ့ ပါဘူး ။
အခု တော့ သူဟာ အင်္ဂလန် မှာ ခံစစ် ကစား ကွက် ခင်းကျင်း ခဲ့တာ လား လို့ အမေး ခံလိုက် ရတဲ့ အခါ မှာတော့ ဗန်ဂါးလ် က …
” အဲ့တာ အမှန် မဟုတ် ပါဘူး ။ ခင်ဗျား တို့က အဲ့တာ ဟာ ပျင်းရိဖွယ် ကောင်းတယ် လို့ ဆိုကြ တယ် ။ ဘာဖြစ် လို့ ပျင်းရိ စရာ ဖြစ်နေ ခဲ့ ရတာ လဲ ? ဒါဟာ တိုက်စစ် ကစား ဟန် အရ ပျင်းရိဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကစား ကွက် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေ ပါ လိမ့်မယ် ။ အဲ့တာ ကလည်း ပြိုင်ဖက် က ခံစစ် ပိတ်ဆော့ နေလို့ ပဲလေ ”
” အဲ့ဒီ လို အချိန် မျိုးမှာ ကျွန်တော် တို့က အရှိန်မြှင့် ကစား ကြ ရမှာ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီ လို အနေအထား က တစ်ကယ့် တမ်း မှာတော့ ခက်ခဲ လှ ပါတယ် ။ အဲ့တာ ပြီးရင် တော့ ကျွန်တော် တုိ့ အသင်း မှာ ဘယ်လို ကစားသမား တွေ ရှိနေ ကြ သလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရ ပါ့မယ် ”
” ရွန်းနီ က နံပါတ် 10 ကစားသမား ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ က ကျွန်တော် တို့ အသင်း မှာ ကောင်းမွန်စွာ အံဝင် တဲ့သူ မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ တိုက်စစ် အတွက် ဝိန်း တစ်ဦး တည်းသာ အကောင်းဆုံး အဖြစ် ရှိနေ ပါ တော့တယ် ။ ယူနိုက်တက် မှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် မှူး တစ်ဦး လိုအပ် နေ ခဲ့တယ် ” လို့ ဗန်ဂါးလ် က ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဗနျပါစီဟာ ယူနိုကျတကျ မှာ ကစားဖို့ အတှကျ အံဝငျတဲ့သူ မဖွဈခဲ့ဘူးလို့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ #ဗနျဟားလျ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ နညျးပွ ဟောငျး ဖွဈသူ လူးဝဈ ဗနျဂါးလျ က အသငျး မှာ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ အခြိနျ ကာလ အတှငျး ရျောဘငျ ဗနျပါစီ ဟာ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ ဆကျလကျ ကစား ဖို့ သငျ့တငျ့ တဲ့ ခွစှေမျး ကောငျးမှနျ ခွငျး မရှိ ခဲ့ဘူး လို့ ဆိုသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
ဗနျပါစီ ဟာ အာဆငျနယျ မှ ယူနိုကျတကျ ဆီ ပေါငျ 24 သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ ရောကျရှိ လာသူ ဖွဈခဲ့ ပွီး ယူနိုကျတကျ တို့ နောကျဆုံး ပရီးမီးယား လိဂျ ဆှတျခူး ခဲ့တဲ့ 2012 – 13 ရာသီ မှာ အသငျး အတှကျ အထူး ခွစှေမျး ကောငျး ပွသ ရငျး 26 အထိ သှငျးယူ ပေးထား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ အကျစတှနျ ဗီလာ အသငျး နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ အတှငျး သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ ရျောဘငျ ဗနျပါစီ ရဲ့ ဟတျထရဈ က ယူနိုကျတကျ တို့ကို အကွိမျ 20 မွောကျ ပရီးမီးယား လိဂျ ဖလား ကို ရရှိ စခေဲ့ ပါတယျ ။
အ့ဒီ နောကျ အသငျး ကို နညျးပွ သဈ ဒေးဗဈ မိုယကျဈ ကိုငျတှယျ ခဲ့တဲ့ ရာသီ မှာ ဗနျပါစီ ဟာ အသငျး အတှကျ 18 ဂိုး ထိ သှငျးယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ပွနျ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ရာသီ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ ဟာ အဆငျ့7အဖွဈ နဲ့သာ ရာသီ ကုနျဆုံး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ နောကျတော့ ယူနိုကျတကျ ဆီကို လူးဝဈ ဗနျဂါးလျ က နညျးပွ သဈ အဖွဈ ရောကျရှိ လာ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ ရာသီ မှာတော့ ဗနျပါစီ ဟာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အသငျး ခေါငျးဆောငျ ဖွဈဖို့ ရပေနျး အစား ဆုံး ဖွဈခဲ့ ပမေဲ့ ဗနျဂါးလျ က ရှနျးနီ ကို အဆိုပါ ရာထူး ပေးသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ 2014 – 15 ရာသီ မှာတော့ ဗနျပါစီ ဟာ အသငျး အတှကျ 10 ဂိုးသာ သှငျးယူ ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး အဆိုပါ ရာသီ က သူ့ရဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမား ဘဝ နောကျဆုံး ဘောလုံး ရာသီ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဗနျဂါးလျ ရဲ့ ခံစဈ နဲ့ ကှငျးလယျ မှာပဲ ဘောလုံး ကိုငျ ကစား ခဲ့ ရတဲ့ ကစား ကှကျ ဟာ ဗနျပါစီ အတှကျ တော့ အကြိုး မဖွဈ ခဲ့ ပါဘူး ။
အခု တော့ သူဟာ အင်ျဂလနျ မှာ ခံစဈ ကစား ကှကျ ခငျးကငျြး ခဲ့တာ လား လို့ အမေး ခံလိုကျ ရတဲ့ အခါ မှာတော့ ဗနျဂါးလျ က …
” အဲ့တာ အမှနျ မဟုတျ ပါဘူး ။ ခငျဗြား တို့က အဲ့တာ ဟာ ပငျြးရိဖှယျ ကောငျးတယျ လို့ ဆိုကွ တယျ ။ ဘာဖွဈ လို့ ပငျြးရိ စရာ ဖွဈနေ ခဲ့ ရတာ လဲ ? ဒါဟာ တိုကျစဈ ကစား ဟနျ အရ ပငျြးရိဖှယျ ကောငျးတဲ့ ကစား ကှကျ ဖွဈကောငျး ဖွဈနေ ပါ လိမျ့မယျ ။ အဲ့တာ ကလညျး ပွိုငျဖကျ က ခံစဈ ပိတျဆော့ နလေို့ ပဲလေ ”
” အဲ့ဒီ လို အခြိနျ မြိုးမှာ ကြှနျတျော တို့က အရှိနျမွှငျ့ ကစား ကွ ရမှာ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီ လို အနအေထား က တဈကယျ့ တမျး မှာတော့ ခကျခဲ လှ ပါတယျ ။ အဲ့တာ ပွီးရငျ တော့ ကြှနျတျော တို့ အသငျး မှာ ဘယျလို ကစားသမား တှေ ရှိနေ ကွ သလဲ ဆိုတာ ကွညျ့ရ ပါ့မယျ ”
” ရှနျးနီ က နံပါတျ 10 ကစားသမား ပါ ။ ဒါပမေဲ့ ရျောဘငျ ဗနျပါစီ က ကြှနျတျော တို့ အသငျး မှာ ကောငျးမှနျစှာ အံဝငျ တဲ့သူ မဟုတျ ပါဘူး ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော တို့ တိုကျစဈ အတှကျ ဝိနျး တဈဦး တညျးသာ အကောငျးဆုံး အဖွဈ ရှိနေ ပါ တော့တယျ ။ ယူနိုကျတကျ မှာ ကမ္ဘာ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ မှူး တဈဦး လိုအပျ နေ ခဲ့တယျ ” လို့ ဗနျဂါးလျ က ဖှငျ့ဟ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။